Taliyaha Hogaanka Socdaalka oo Xafiis Cusub oo Baasaboorada lagu bixiyo ka furay Dalka Koonfur Afrika – idalenews.com
Taliyaha Hogaanka Socdaalka oo Xafiis Cusub oo Baasaboorada lagu bixiyo ka furay Dalka Koonfur Afrika
Hoggaanka Socdaalka iyo Jinsiyadaha Soomaaliaya ayaa gelinkii danbe ee shalay xafiis ka furay wadanka Koofur Afrika, kaasi oo dadka Soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool ay ka qaadan doonaan Baasaboorka Soomaaliga ah.
Gelinkii dambe ee shalay ayaa gudaha safaarada Soomaalida ee dalka South Africa lagu qabtay xaflad lagu furayay xafiiska waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha ee Soomaaliya, waxaana ka qeybgalay Danjiraha Soomaaliya ee dalkaasi, iyo General Gaafoow oo ah taliyaha hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha oo maalmahan booqasho ku joogay dalkaasi.
Tliyaha hoggaanka socdaalka iyo Jinsiyadaha Gen. C/laahi Gaafoow oo halkaasi ka hadlay ayaa jaaliyada Soomaalida ee ku nool dalkaasi u sheegay in wixii ka dambeeya maalinta Isniinta ahuu bilaabidoono bixinta baasaboorka Soomaaliga ah.
Jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi ayaa si weyn usoo dhaweeyay furitaanka xafiiskan, iyagoo ku amaanay wafdiga ka socda dowlada ee ku sugan dalkaasi dadaalka iyo waxqabadka ay muujiyeen.
Wafdiga ka socda wasaarada arrimaha dibada ee booqanaya dalkaasi islamarkaana uu hogaaminayo wasiir ku xugeenka arrimaha dibada ayaa ku guuleystay in Soomaalida laga qaado xayiraadii dhinaca safarka, aqoonsiga Baasaboorka Soomaaliga ah, furitanka xafiiska Waaxda socdaalka iyo Jinsiyadaha iyo arrimo kale oo muhiim u ah Soomaalid a ku nool dalkaasi.
Saraakiisha gobolka Bakool oo sheegay in ay wada hadal kula jiraan Abu Mansuur Roobow
Wafdi uu hogaaminaayo Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya oo gaarey Turkiga si uu ugu qayb galo wada hadalka Somalia iyo Somaliland